Vaovao Cofttek - Sakafo mpamatsy akora mpamatsy sakafo
Taorian'ny fanadihadiana natao tamin'ny 2019 dia namintina fa ny Nicotinamide Mononucleotide dia azo antoka hohanin'ny olombelona raha toa ka voafetra amin'ny fetra voatondro ny fanjifana azy, orinasa mpamokatra maro no niditra an-tsena niaraka tamin'ny fanatiny. Ity safidy diso tafahoatra ity dia nahatonga ny mpividy hafangaro momba izay fanampiana Nictonimade Mononucleotide (NMN) sahaza azy ireo. Raha ny hevitray, ny fanampiana tsara indrindra manohitra ny fahanterana Nico ...
Raha mitady fanampim-panampiana Magnesium L-Threonate tsara ianao, dia manoro hevitra ny mividy vovo-dronono Magnesium Threonate avy amin'ny Cofttek. Nilaza ny orinasa fa manatsara ny bioavailability ny magnesium amin'ny vatana. Nilaza ihany koa ny orinasa fa ny vovony omen'ny orinasa dia manohana ny fiasan'ny fitadidiana ary manatsara ny fiasan'ny kognitika amin'ny ankapobeny. Manampy ireo mpampiasa hatory tsara koa izy ireo. Cofttek dia mpamatsy Magnesium L-Threonate izay ...
Raha mitady vovoka Palmitoylethanolamide (PEA) avo lenta amidy ianao, dia eo amin'ny toerana mety ianao. Izahay dia iray amin'ireo mpanamboatra Palmitoylethanolamide (PEA) malaza indrindra, be fahalalana, ary manana traikefa any Shina. Manome vokatra madio sy fonosana tsara izahay, izay ezahan'ireo laboratoara antoko fahatelo maneran-tany hahazoana antoka ny fahadiovana sy ny fiarovana. Mandefa baiko hatrany manerana an'i Etazonia, Eropa, ...